HomeWararka Maanta SomaliskaSharci Cusub oo maanta ka bilowday Dalka Sweden
1 week ago Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden, Warka ugu akhriska badan 0
Maanta, sharciga cusub ee Corona la xiriira ayaa ka dhaqan galayaa ama bilowday Sweden, waxana uu soconayaa ilaa 31ka Sebtember.
Sharciga ayaana diirada lagu saarayaa sida looga hortagayo Faafitaanka Corona iyadoo dowlada ay booqaneyso xaruumaha wadanka ee si loo ogaado tirada halkaasi ku sugan iyo hadii ay tahay mid sax ah.
sharciyo cusub ayaa la xiriira sidoo kale isticmaalka hoolalka, goobaha isboortiga, barkadaha lagu dabaasho, dukaamada iyo xarumaha laga adeegto. Halkan Riix ka Akhriso Sharciyadan maanta bilowday
Tusaale ahaan, waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la xisaabiyo tirada ugu badan ee soo booqdayaasha ah ee geli kara xarumahan.
Guddiyada agaasimayaasha gobolada dalka ayaa loo xilsaaray inay hubiyaan in howlaha xarumahan ay la jaan qaadayaan sharciga cusub.
Golayaasha maamulka ee 21-ka gobol ee Iswiidhan waxay heleen labo toddobaad kahor macluumaad ku saabsan sharciyada cusub, si ay ugu diyaar garoobaan hadafkooda ku aaddan hubinta ku dhaqanka sharciga.
Xaaladda jirta awgeed, Gobolka Stockholm wuxuu rajaynayaa inuu kaalmo ka helo degmooyinka iyo hay’adaha awoodda u leh, si loo ogaado dhaqdhaqaaqyada halista ugu badan ugu jira inuu ku faafo aagga gobolka.
“ Ma awoodi doonno inaan meel walba joogno, markasta … waa inaan ka hormarinaa howlaha waxqabadyada kuwa kale,” ayuu yiri Matthias Walsten, madaxa waaxda arrimaha sharciga ee guddiga gobolka.
Baarlamaanka Sweden ayaa u codeeyay sideedii bishaan inay ansixiyaan sharciga ku meel gaarka ah ee Corona, oo ay soo bandhigtay dowlada, si uu u dhaqan galo laga bilaabo 10-ka Janaayo, ilaa iyo dhamaadka bisha soo socota ee September.
Sharciga ayaa siinaya dowladda awood badan oo looga hortago faafitaanka cudurka, maadaama ay awood u yeelan doonto, in la xadido saacadaha shaqada ee dukaamada, matxafyada iyo goobaha jimicsiga, iyo in laga hortago booqashooyinka jardiinooyinka, xeebaha iyo meelaha kale ee bulshada si loo yareeyo ciriiriga. Waxay sidoo kale awood u yeelan doontaa inay xoojiso gebi ahaanba xiritaanka xarumaha dukaamaysiga, saldhigyada tareenka iyo gaadiidka dadweynaha.
Dawladdu waxay uga baahnayd sharcigan baarlamanka maxaa yeelay sharciga Iswidhan uma ogalaanayo inay ku soo rogto talaabooyin fara-gelin ah nolosha dadka, laakiin ka dib markii sharciga la meel mariyo, waxay qaadi kartaa talaabooyin adag